Ofisialy izao; ny Samsung Galaxy S8 dia haseho amin'ny 29 martsa | Vaovao momba ny gadget
Ofisialy izao; Ny Samsung Galaxy S8 dia haseho amin'ny 29 martsa
Nandritra ny andiany vitsivitsy tamin'ny Mobile World Congress, Samsung dia iray amin'ireo mahery mpihetsika, noho ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny Galaxy S vaovao am-perinasa. Tamin'ny hetsika tamin'ity taona ity dia mbola tsy nanolotra ofisialy ny Galaxy S8, saingy nanamafy ny daty nahatongavan'izy ireo teo amin'ny tsenan'ny flagship vaovao.
Ho avy eo 29 martsa amin'ny 11 maraina ary any New York City rehefa afaka mihaona amin'ny Samsung Galaxy S8 vaovao isika, araka ny voamarina amin'ny fampisehoana ireo fitaovana vaovaon'izy ireo.
Vitsy ireo niloka filokana satria nahita ny Samsung Galaxy S8 vaovao isika tao amin'ity MWC ity, saingy minitra vitsy lasa izay dia nanjavona tanteraka izany mety hitranga rehefa nanambara ny UNPACKED tamin'ny volana martsa i Samsung, tamin'ny daty iray izay efa niseho saika ny rehetra. tsaho sy famoahana.
Ankehitriny dia mila miandry fotsiny isika ary manohy mandritra ny andro vitsivitsy hahalala tsaho momba ny vaovao rehetra momba ny Galaxy S8, ary azo antoka fa marobe ny fivoahana, amin'ny endrika sary na horonan-tsary ho hitantsika amin'ny andro sy herinandro ho avy.
Mihevitra ve ianao fa nahomby i Samsung tamin'ny fametrahana ny fampisehoana ofisialy ny Galaxy S8 amin'ny 29 martsa ho avy izao, nanalavitra ny Kongresin'ny World Mobile?. Omeo anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ofisialy izao; Ny Samsung Galaxy S8 dia haseho amin'ny 29 martsa
Huawei Watch 2, safidy vaovao sy mahaliana amin'ny tsenan'ny smartwatch
Huawei P10, finday avo lenta tsara indrindra an'ny mpanamboatra sinoa hatramin'izao